ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Key ကို - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Activation Key ကို 2017 - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Key ကို – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Activation Key ကို 2017
အားဖြင့် softkelo | ဧပြီလ 6, 2018
ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Key ကို ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရည်မှတ်သင့်ရဲ့ယာဉ်မောင်းများ၏အားလုံးဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက်ကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာမိုင်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောယာဉ်မောင်းများရှိပါတယ်ဖြစ်စေမသင့်ရဲ့ Non-အများပြည်သူ Laptop ကိုထွက်စစ်ဆေးနှင့်ယိုယွင်းနိုင်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်. ယာဉ်မောင်း၏ဤအမျိုးအစားသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တည်ရှိသည်လျှင်ဤစက်ကိရိယာစက်ရုပ်အလျင်အမြန်သူတို့ကိုကို update. ဒါဟာပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့အဆောက်အဦများအပြေးအသီးအသီးမျိုးများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်, မက်, ဒါကြောင့်ထွက် Linux နဲ့. ဒါ easy.You ရုံကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်တန်ချိန်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်စက်ရုပ်င်း၏ပန်းချီကားများအပေါငျးတို့သပြုပါလိမ့်မယ်. ၎င်း၏ interface ကိုကျိန်းသေချောမွေ့လွယ်ကူနှင့်၎င်းတို့၏ယာဉ်မောင်းကို update အဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများပေါ်မှာဤဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးလူသားထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထောင်ပေါင်းများစွာကျော်.
တခါတရံသင်သည်သင်၏ PC operating သို့မဟုတ်ထိထိရောက်ရောက်ပေါ်ထွန်းမဟုတ်ကြောင်းခံစားရ, ၎င်း၏ယာဉ်မောင်းအချို့ corrupted.For ဥပမာများမှာ, တစ်ဦး Skype ကိုအသုံးပြုခြင်းစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သီချင်းမှစေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်ခြင်း, သင့်ရဲ့ Laptop ကိုဖွင့်သံကိုအမြဲသင့်ရဲ့ PC ပေါ်တွင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က window ထဲမှာထားရန်ကြောင်းအချိန် nicely.At သင့်ရဲ့စိတ်ကူး operating မဟုတ်ပါ. သို့သော်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က window ထဲမှာထားရန်မရှိ, သင်ရုံအသုံးပြုရမည် ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Activation Key ကို 2017. ဒါဟာအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့အားလုံးဒရိုင်ဘာကိုအစားထိုးခြင်းနှင့်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. အားလုံး drivers တွေကိုကုစားသွားမယ့်.
ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Key ကို
ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Key ကို Download လုပ်ပါ
ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater ကို Crack သင့်ရဲ့ Laptop ကိုကနေ updates များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်မျှမတို့အချိန်၌သူတို့ကို update နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာချောမွေ့ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူတက်လာနိုင်တယ်လို့ခေတ်ပြိုင်ဓာတ်ပုံတွေကားမောင်းသူနေရာချထားနိုင်ပါတယ်, streaming များနှင့်လည်းမီဒီယာ Modify. ဒါဟာအပြစ်ကင်းစင်စွာပြဿနာတွေနဲ့မပါဘဲ drives တွေကို update လုပ်နိုင်မအနေနဲ့လက်လှမ်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဒါဟာအလိုအလြောကျစာမေးပွဲယာဉ်မောင်းများနှင့်မွမ်းမံမှုများ၏စုံတွဲတစ်တွဲကချက်ချင်းအလွယ်တကူ. ဒါဟာစမ်းသပ်နိုင်သည် 127,000+ တစ်ကြိမ်မှာယာဉ်မောင်း. ဒီထက်ပိုမိုမြင့်မားပုံရိပ်တွေမြန် surfing ချမ်းသာကြွယ်ဝအသံ crashing & နည်းပါးလာ device ကိုဒုက္ခ. ဒါဟာသင့်ရဲ့ Laptop ကိုကိရိယာ၏ပိုကောင်းခြုံငုံစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကို update. သင်ကတကယ်သင့်ရဲ့ Laptop ကိုစက်ပေါ်နည်းစနစ်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်အလွန်အခက်အခဲနှင့်မြန်ဆန်မပါဘဲယာဉ်မောင်းအပ်ဒိတ်ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုတပ်ဆင်ထားပြီးနောက်. ဒါဟာအလျင်အမြန် drivers တွေကိုစစ်ဆေးပြီး.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Windows ကို 10 အမြဲတမ်းတက်ကြွ - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Ultimate 2017
ပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Update ကိုကုန်ပစ္စည်း Key ကို ပင်ပရင်တာနဲ့တူသင်၏ကိရိယာများအတွက်ရရှိနိုင်ပြည်နယ်-Of-The-Art မောင်းနှင်မှုအင်အားသုံးဘို့သင့်ကိုအကြောင်းကြားစာချီးမွမ်းစေခြင်းငှါ, စကင်နာ, နှင့်ဗီဒီယိုရည်ရွယ်ချက်ကအင်အားစု. ဒါဟာအများဆုံးလက်ရှိမူကွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်. အရေးကြီးဆုံးကိစ္စရပ်များကိုတစ်ခုမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒီကျိန်းသေအပေါငျးတို့သဖောက်သည်များအတွက်အခမဲ့မိုင်င်. ဒါဟာဝေးဟာ့ဒ်ဝဲ၏ယာဉ်မောင်းများ၏နောက်ဆုံးသတင်းများများအတွက်ဆော့ဖ်ဝဲပရိုဂရမ်ရဲ့. ဒါဟာဝေးအလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကျော်ကြားသော utility ကိုဖွင့်. သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအလိုအလျောက် pc ကိရိယာ၏ယာဉ်မောင်းရှာဖွေရန်နှင့်တင့်တယ်နိုင်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကွန်ပျူတာများအတွက်အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်နိုင်စွမ်းကိရိယာ. ဒါဟာမဆိုဒုက္ခမရှိဘဲသင်၏ laptop ကို၏ယာဉ်မောင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာစစျဆေးနိုငျ 130,000 တစ်ကြိမ်ပေါင်းဒရိုင်ဘာ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအနေအထား၌သင်တို့၏ Laptop ကို သာ. ကြီးမြတ်အမြန်နှုန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်စေနိုင်ကြောင်းတစ်ဦးတိုးတက်လာဆော့ဗ်ဝဲပရိုဂရမ်. ဒါဟာသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ tool ကိုအောင်သောသစ်ကို updates များကိုအပေါငျးတို့သထွက်သယ်ဆောင်ပိုမိုမြင့်မားများအကြားလုပ် connection ကို add နိုင်ပါတယ်.
ကွဲပြားခြားနားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်, ကျနော်တို့ကအားလုံးကိုအသစ်က updates များကိုအပေါ် updated ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်မဟာဗျူဟာကြောင်းပြောနိုင်ကြသည်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ PC ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်, ကွန်ပျူတာနှင့်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ယခင်ယာဉ်မောင်းအခြား gadgets. ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ PC အတွက်သင့်လျော်ခြင်းနှင့်စံပြဖြစ်နိုင်သည့်သစ်ကိုယာဉ်မောင်းသားအပေါငျးသငျသညျကို download လုပ်ပါဖို့ရှေးခယျြမှုပေးသည်နှင့်တပ်ဆင်ပြီး. အားဖွငျ့, ဒီသင့်ကိရိယာ၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အားကောင်းစန်းဦးမည်. ဒါဟာစက်ရုပ်အားလုံးသင်၏ laptop များအတွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ PC device ကိုကျေနပ်နိုင်. သင်သည်သင်၏ PC system ပေါ်တွင်ဤလျှောက်လွှာကိုတက်ထားသောအခါပျမ်းမျှယာဉ်မောင်း Updater အက်ကွဲသမိုင်းအတိတ်ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်. ဒါဟာ gadget ကအဆင့်မြှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကအင်အားစုအလွန်သန့်ရှင်းတဲ့အစာရှောင်စေသည်. ဒါဟာကြီးမားတဲ့မောင်းနှင်မှုအင်အားသုံးဒေတာဘေ့စရှိပါတယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲက crashing နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာရင်ဆိုင်ရသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်ဟုအေးခဲနေသောတူသောအားလုံးကိစ္စများ. သူတို့ကလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သင့်ရဲ့ device ကိုမှထွက်ကိုချွတ်ပယ်နှင့်သင့်စျထှနျးစေနှင့်စောင့်စေခြင်းငှါ.
← Windows ကို 10 အမြဲတမ်း active – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Ultimate 2017 Serial လိုင်စင်ကီးနဲ့ Glary Utilities ကို Pro ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် →